DG Puntland oo Ciidan dheeraad ah geysay Calmiskaad & Galgala. - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DG Puntland oo Ciidan dheeraad ah geysay Calmiskaad & Galgala.
DG Puntland oo Ciidan dheeraad ah geysay Calmiskaad & Galgala.
DG Puntland ayaa xoojisay Ciidamada ka jooga dhulka buuraleyda ah ee Gobolka Bari gaar ahaan Calmiskaad & Galgala kadib markii ay kordheen howlgallada iyo dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee kasoo horjeeda.
Taliyaha Howlgelinta ciidamada PMPF G/S Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed ayaa Warbaahinta u sheegay in howlgallada ay bilaabeen ay u qorsheeyeen in ay gacanta ku dhigaan deegaanno dhowr ah waa sida uu hadalka u dhigay.
Cabdiraxmaan waxa uu tilmaamay in Ciidanka ilaalada badda iyo beriga DG Puntland ee PMPF oo garab ka helaya Ciidamada kale ee maamulkaas in wadajir ay u xoojiyeen howlgallada ay ka wadaan Dhulka Buuraleyda ah ee Gobolka Bari.
Ciidamada ammaanka DG Puntland oo Jimcihii dagaal la galay Kooxda Daacish ayaa kordhiyay howlgallada & askarta ku sugan Deegaanka Buuraleyda ah ee Calmiskaad, gurmad ka tagay deegaanno kale ayaa xalay gaaray.
Saraakiisha hoggaamineysa howlgallada Ciidanka Puntland ayaa sheegtay in howlgalkoodu uu sii soconayo ilaa inta ay gacanta ku dhigayaan deegaannada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish waa sida ay hadalka u dhigeen.